दिर्घकालिन सोचका साथ अघि बढिरहेका छौ : नगर प्रमुख डा. पौडेल – Ankush Daily
दिर्घकालिन सोचका साथ अघि बढिरहेका छौ : नगर प्रमुख डा. पौडेल
On २० पुष २०७४, बिहीबार १७:५६
जितपुर बारा, २० पौष ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनको अवसरमा योजना कार्यान्वनको थालनी गरेका छन् । छोटो समयमै कार्ययोजना बनाउदै दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलो पटक नगर सभा सम्पन्न गरेको उपमहानगरले एक सय दिनको अवसर पारेर विहिवार ६ वटा योजना सुरु गरेको हो ।
कात्तिक ३० गते सम्पन्न प्रथम नगर सभाबाट पारित योजनालाई उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्ने गरी नगर प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले सयौं दिनमा शिलन्यास गरिएको हो । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १६ स्थित पिलुवामा रहेको रामजी आदर्श खानेपानी उपभोक्ता समितिको पर्खाल र गेट निर्माण, १५ नम्बर वडास्थित हात्तिसारमा दुई वटा सडक ढलान, १८ नम्बरस्थित उचिडिमा सडक ढलान, ५ नम्बरस्थित बकुलियामा सडक ढलान र ७ नम्बरस्थित जीतपुरमा सडक ढलानको शिलन्यास गरिएको हो ।
योजना शिलन्यासका क्रममा उपमहानगर उपप्रमुख सरस्वती चौधरी, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामकृष्ण उप्रेतीसहित १६ का अध्यक्ष केदार बजगाई, १५ का अध्यक्ष रामप्रसाद लामिछाने, १८ का अध्यक्ष अर्जुन दहाल, ५ का अध्यक्ष मोहित चौधरी, ७ का अध्यक्ष रामबाबु गुप्ता, १४ का अध्यक्ष रामशरण बर्तौला, १० का अध्यक्ष सरोज पटेल, २३ का अध्यक्ष अस्लम देवान, १९ का अध्यक्ष सुदन दास तत्मा, १ का अध्यक्ष हिराबहादुर गुरुङ, २० का अध्यक्ष रसुल मिया, ३ का अध्यक्ष जगन्नाथ घिमिरे, कार्यपालिकाका सदस्य शोभा कार्की, सुभद्रा न्यौपाने, अनिता चौधरी, सुन्दर सुनार, राजकुमार रामल, लेखा अधिकृत बिसमिल्लाह अंसारी, ईन्जिनियर सञ्जीब रुपाखेतीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
‘उपमहानगरमा आएलगत्तै छोटो समयमा सर्वसम्मतरुपमा नगर सभा सम्पन्न गरी योजना निर्माण गरेका थियौ’ नगर प्रमुख डा. पौडेलले भने ‘आज हामी सयौं दिनमा प्रवेश गर्‍यौ र आजैबाट काम पनि सुरु भएको छ ।’ उपमहानगरमा जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै बिजयादशमी, दिपावली, छठ, ईदलगायत विभिन्न पर्वको सार्वजनिक बिदा र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका कारण कार्यलय नियमित सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा यसबिचमै नगर सभा सम्पन्न गरेर कामको थालनी गर्नुलाई उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्ने नगर प्रमुख डा. पौडेलको भनाई छ । लामो समयपछि जनप्रतिनिधि आएकाले जनताका आकांक्षा र चाहना अधिक रहेको भन्दै नगर प्रमुख डा. पौडेलले योजनाबद्ध ढंगबाट जनताले चाहेको बिकासका कामलाई गति दिईने बताए । कार्यभार सम्हालेको एक महिना भित्रै २४ वटै वडामा कार्यलय सञ्चालन गरेर स्थानिय सरकारको प्रत्याभुती दिलाउने गरी कामको थालनी गरेको भन्दै उनले जनतालाई बिकासको अनुभुती गराउने गरी अब नगर सभाको योजनालाई अघि बढाइने बताए ।
‘एक सय दिन पुग्दा जनप्रतिनिधिले परिवर्तन देखिने गरी केही काम पनि गरेनन् भन्ने कुरा सुनिरहेको छु, परिवर्तन रातारात हुन असम्भव छ भन्ने कुरामा नगरबासी पनि जानकार हुनुहुन्छ’ नगर प्रमुख डा. पौडेलले भने ‘उपमहानगरलाई ब्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न समय लाग्छ ।
योजनाबद्ध ढंगबाट अघि बढ्ने क्रममा केही समय लागेको छ । दिर्घकालिन सोचका साथ अघि बढिरहेका छौ । उपमहानगरको काम नगरबासीले छिट्टै देख्न पाउनुहुनेछ । ’
निर्वाचित भएर सपथ ग्रहण गर्ने क्रममा भोजपुरी भाषालाई उपमहानगरको दोस्रो कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिदै कार्यभार सम्हालेका नगर प्रमुख डा. पौडेलले ठुलो समस्याको रुपमा रहेको फोहोर ब्यवस्थापनको समस्यालाई दिर्घकालिनमा रुपमा समाधान हुने गरी ल्याण्डफिल्डसाईडको काम अघि बढिसकेको बताए ।
पूवार्धारका हिसाबले अत्यन्त कमजोर भएपनि सम्भावनाका हिसाबले दुई नम्बर प्रदेशकै उत्कृष्ट र समृद्ध उपमहानगर बनाउन सकिने सोचका साथ अघि बढेका नगर प्रमुख डा. पौडेलले जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई समृद्ध बनाउन वृहत्तर गुरुयोजना निर्माणमा आफू लागेको बताए ।
उपमहानगरले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि झण्डै ८५ करोडको बजेट बिनियोजन गरेको थियो । उपमहानगरको बजेटले मात्रै सोचेजस्तो बिकासका काम गर्न असम्भव रहेको भन्दै उनले केन्द्रीय अनुदानका निम्ति विभिन्न सरोकारवाला निकाय र दातृसंस्थासंगको भेट र परामर्शलाई पनि तिब्रता दिदै आएका छन् । एकीकृत शहरी विकास योजनाको गुरुयोजना बनाउन र अर्वान डेभलपमेन्ट करिडोर रुपमा अघि बढाउन डा. पौडेलले काठमाण्डौ पुगेर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा पहल थालेका छन् ।
उपमहानगरले जीतपुरमा करीव पचास करोडको लागतमा दुई सय शैय्याको अस्पताल, सर्पदंश उपचार केन्द्र र शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्ने योजना बनाइसकेको छ । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकी स्थापनाको पहल गर्ने निर्णय गरेको उपमहानगरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि समेत चासो देखाएको छ ।
उपमहानगरले डुमरवाना, अमलेखगञ्ज, मनहर्वा र इनर्वासिरामा बर्थि· सेन्टर र २४ घण्टे इमर्जेन्सी सेवा स्थापना गर्ने योजना सहित अघि बढेको नगर प्रमुख डा. पौडेलले बताए । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने र अतिरोगमा सहयोग र स्वास्थ्यबिमा लागु गर्ने बिषयमा समेत उपमहानगर गम्भिर रहेको उनको भनाई छ ।
८४ बर्ष पुरा गरेका बृद्धबृद्धालाई चौरासी विशेष सम्मान गर्ने योजनानै बनाएर अघि बढेको उपमहानगरले अपांगताको क्षेत्रमा अपा·मैत्री सडक, सार्वजनिक संरचना र अपा· परिचयपत्र र भत्ताको संयोजन गर्नुका साथै स्वास्थ्यशिविर सञ्चालन गरेर जेष्ठ नागरिकलाई घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था गर्ने कामलाई अघि बढाएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण पर्यटनको सम्भावना रहेकाले चुरिया, अमलेखगञ्ज, आधाभार र पथलैयालाई समेटेर पर्यटन जोन निर्माण गर्ने योजना उपमहानगरको रहेको प्रमुख डा. पौडेलले बताए ।
सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गा व्यवस्थापन, सुकुम्बासी समस्या समाधान र एकीकृत बस्ती निर्माणका बिषयमा पनि उपमहानगर योजनाका साथ अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।